नवलपरासीमा चुनावी दौड को संग कसको भिडन्त ?
By vijayafm on	 November 7, 2017 देश, फोटो फिचर, राजनीति, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
गैँडाकोट । मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको माहोल नवलपरासीमा सुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा पर्ने पूर्वि नवलपरासी र ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने पश्चिम नवलपरासीमा दलहरु चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न रणनीति बनाउन व्यस्त रहेका छन् । पूर्वी नवलपरासीमा मात्रै एक दर्जन दलहरु चुनावी दौडमा रहेका छन् । पूर्वि नवलपरासीमा नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नयां शक्ति पार्टी नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, मंगल नेशनल अर्गनाइजेशन, राष्टिय जनमोर्चा नेपाल, रााष्टिय जनमुक्त पार्टी, विवेकशिल साझा पार्टी, शिवसेना पार्टी, जनसमाजपार्टी नेपाल लगायतका दलले उम्मेद्वार उठाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका लागि नवलपरासी क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तेस्रो पटक चुनावी दौडमा हुनुहुन्छ । यसअघि २०६४ सालको र २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा कोइरालाले यस क्षेत्रबाट विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो । कोइरालाको प्रतिद्वन्दीमा बाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका भविश्वर पराजुली हुनुहुन्छ । पराजुली भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान नेपालका केन्द्रीय संस्थापक अध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ । पराजुली नयाँ अनुहार र बाम गठबन्धनले कमजोर उम्मेदवार उठाएको भन्दै आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको काँग्रेसको भनाई रहेको छ भने नवलपुर क्षेत्रमा अंकगणितको हिसावमा काँग्रेसको भन्दा बामगठबन्धनको बढी मत रहेको गठबन्धनको दाबी रहेको छ । यस क्षेत्रबाट प्रदेश सभाकालागि नेपाली काँग्रेस र बामगठबन्धनबाटै बढी प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । प्रदेश क मा नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली र बामगठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका सूर्य न्यौपानेबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ । प्रदेश ख मा काँग्रेसका महेन्द्रध्वज जिशि र बामगठबन्धनबाट एमालेका रोशनबहादुर गाहाबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुदैछ ।
यस्तै पूर्वि नवलपरासीको २ नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाका लागि नेपाली काँग्रेसबाट महासमिति सदस्य विष्णु कार्की र एमालेका बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तिलक महतबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ । यस क्षेत्रमा प्रदेश क मा नेपाली काँग्रेसका विष्णु लामिछाने र बामगठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका किसान शर्माको उम्मेदवारी रहेको छ, यस्तै प्रदेश ख मा नेपाली काँग्रेसका गणेशमान श्रेष्ठ र बामगठबन्धनबाट जनकलाल श्रेष्ठबीच प्रतिष्पर्धा हुने छ ।
पश्चिम नवलपरासीमा पनि चुनावी चहलपहल बढेको छ । पश्चिम नवलपरासी क्षे नं. १ को प्रतिनिधि सभा तर्फ नेपाली काँग्रेसबाट देवकरण जैसवाल र बामगठबन्धनबाट हृदयेश त्रिपाठी चुनावी दौड हुनेछ । त्रिपाठीले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा उत्रदै हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रको प्रदेश सभा क मा नेपाली काँग्रेसबाट विक्रम खनाल र बाम गठबन्धनबाट दिपेन्द्र अधिकारी रहनुभएको छ । यसैगरी प्रदेश ख अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसबाट मुकल आचार्य र बामगठबन्धनबाट अजय शाही चुनावी दौडमा रहनुभएको छ ।
पश्चिम नवलपरासी २ मा प्रतिनिधि सभाका लागि नेपाली काँग्रेसबाट देवेन्द्र राज कंडेल र बाम गठबन्धनबाट घनश्याम यादबबीच प्रतिष्पर्धा हुने छ । यस क्षेत्रको प्रदेश सभा क मा नेपाली काँग्रेसका गुणनिधि तिवारी र बाम गठबन्धनबाट वैजनाथ चौधरी प्रतिष्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रको निर्वाचनलाई पनि कडा प्रतिष्पर्धा हुने मानिएको छ । प्रदेश ख मा नेपाली काँग्रेसबाट बैजनाथ जैशवाल र बाम गठबन्धनबाट कन्हैया कोहारबीच प्रतिष्पर्धा हुने छ ।
नवलपरासी पूर्व क्षेत्र का प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरु